Fiber Optic Kugumisa Bhokisi Vagadziri & Vatengesi - China Fiber Optic Kugumisa Bhokisi Fekitori
Fiber optic kugumisa bhokisi zvimwe zvinonzi fiber optic chinouraya bhokisi chinhu chinouraya mudziyo we fiber optic tambo, imwe mugumo ndeye optical tambo uye imwe muswe weiyo fiber optic. Fiber optic kugumisa mabhokisi akakosha pakubatanidza fiber optic tambo uye pigtail, inopa yakachengeteka uye yakachengeteka dzimba dzinodzivirira fiber optic zvimedu uye inogonesa nyore kuongorora uye kugovera muFTTx yekutaurirana network.
Jera bhokisi rekugovera rinoitwa zvinoenderana neIP kudzivirirwa mamaki, ayo anotendera iwo mabhokisi anoshandiswa mukati nekunze. Iyo inoshandiswa senzvimbo yekumisa ye feeder tambo yekubatana nedonhwe tambo muFTTx yekutaurirana network system. Iyo fiber inoparadzanisa, kutsemura, kugovera kunogona kuitwa mubhokisi rino, uye panguva iyi inopa dziviriro yakasimba uye manejimendi kune iyo FTTx network chivakwa.
Mhando dzakasiyana dzefibre optic mabhokisi ekuparadzira akapatsanurwa zvinoenderana nemagetsi fares cores.Mabhokisi edu ekumisa anokwanisa kuiswa ne fiber optic tambo, patch tambo, pigtails tambo nenzira iri nyore.
Jera akaongorora akawanda magadzirirwo e fiber optic kugumisa bhokisi, isu tinozvipira isu kuti tipe yakavimbika, yakasimba uye inodhura zvigadzirwa kune vatengi vedu. Jera's fiber optic kugumisa mabhokisi anopa echimakanika dziviriro, inoshanduka fiber nzira manejimendi uye kutonga.
Tinopa zvese zvishongedzo zveFTTH network kuvakwa: Fiber optic adapter, fiber optic patch tambo, fiber optic splice kuvhara, kudonhedza tambo tambo, pole mabhureki, simbi dzesimbi zvisungo uye nezvimwe. ayo anowanikwa murabhoritari yedu yemukati, yakadai se + 70 ℃ ~ -40, Tembiricha uye humidity cycling test, Tensile simba bvunzo, Kukwegura bvunzo, IP bvunzo uye nezvimwe.
Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve iwo fiber optic yekuparadzira bhokisi.
Fiber optic waya yekuparadzira bhokisi, FODB-16X
Ftth tambo inouraya bhokisi, FODB-16A.1
Fiber optic waya yekuparadzira bhokisi, FODB-2
Fiber optic tambo yekumisa bhokisi, FODB-4
Fiber optic yekuparadzira bhokisi, FODB-6
Yemukati fiber tambo yekuparadzira bhokisi, FODB-8R
Ftth fiber tambo yefafisi, ODP-02
Fiber Optical Kuparadzira zvigadziko, ODP-06
Fiber Optical Distribution soketi, ODP-02M
Fiber yakakosha dziviriro kesi, PC-1-1